Amaphazili amasha kaPepsiCo azotshalwa emasimini e-Altai - Potato System Magazine
Amazambane esitshalo esisha se-PepsiCo azotshalwa emasimini e-Altai
Ngokusho kwephephandaba "Altai iqiniso", Umlimi wase-Altai u-Andrei Platonov usayine inkontileka yeminyaka emibili yokulethwa kwezinto zokusetshenziswa kwaLay's, engakakhiwa, eNovosibirsk.
Ngokwesivumelwano, kulo nyaka ipulazi selitshala amathani angama-20 amazambane embewu aseNewton. Futhi, kule sizini, ibhizinisi lithembisa ukukhulisa amazambane abilayo wezinhlobo ze-BP-808 (le mikhiqizo izosuswa ukuze icutshungulwe esifundeni saseMoscow ekwindla).
UPepsiCo uqala ukwakhiwa kwesitshalo eNovosibirsk
Ngonyaka olandelayo, umlimi uzobekela eceleni amahektha ayikhulu amazambane angaqokiwe, azosetshenziselwa ama-chip. Isivumelwano sesivele sikhombe intengo lapho lesi sitshalo sizothenga le mikhiqizo ngoSepthemba 2021 - 12,50 ruble ngekhilogremu.
U-Andrey Platonov uthe usenolwazi lweminyaka eyisikhombisa sokukhulisa ama-potato chips, ngaleso sikhathi izinhlobo ezingaphezu kwamashumi amathathu sezivivinyiwe emasimini akhe.
"Ngenxa yalokho, uLady Claire, uNewton no-BP-808 baba ngabahamba phambili esifundeni sethu," kusho lo mlimi. Futhi uyagcizelela: “Izidingo zomenzi wamazambane zekhwalithi yamazambane ziqine kakhulu. Ukuvunwa kuhlolwa ngamapharamitha amaningi, kufaka phakathi ukulinganisa ushukela kanye nesitashi kuma-tubers. Uma ushukela, ngokwesibonelo, weqa, khona-ke ama-tubers azofiphala mnyama, lokhu kuzothinta ukubukeka kwama-chip. Lokhu akwamukeleki. "
Qaphela futhi ukuthi izinto ezingavuthiwe zesitshalo sokwenza ama-chips zizotshalwa emapulazini ambalwa we-Altai Territory.
Source: Altai iqiniso
Tags: Isitshalo sePepsiCo eNovosibirskama-chips ukukhiqizaama-potato chips